Imbali yeParachute (Inventors and Innovations)
I-Credit for the creation of parachute yokuqala isebenza kuSebastien Lenormand obonise umgaqo-parachute ngo-1783. Nangona kunjalo, i-parachute yayicatshulwe ngu- Leonardo Da Vinci (1452-1519) ngeenkulungwane ngaphambili.
Imbali yokuqala yeParachute
Faust Vrancic kaHomo Volans Parachute. Faust Vrancic
Ngaphambi kweSebastien Lenormand, abanye abenzi bokuqala baqulunqwe kwaye bavavanywa iiparachuthi. Ngokomzekelo, uCroatia uFaust Vrancic, wakha isixhobo esekelwe kumzobo kaDa Vinci.
Ukuze abonise, uVrancic wagijima esuka kwinqaba yaseVenice ngo-1617 egqoke iparachute eqinile. UVrancic wachaza iparachute yakhe kwaye wayipapasha eMakinae Novae, apho echaza khona kwisicatshulwa nemifanekiso engamashumi amahlanu anesithandathu ezakhiweyo zobugcisa, kuquka neparachute yaseVrancic, awayibiza ngokuthi iHomo Volans.
UJean-Pierre Blanchard - I-Parachute yezilwanyana
UmFrentshi uJean Pierre Blanchard (1753-1809) mhlawumbi wayengumntu wokuqala ukusebenzisa iparachute ngxakeko. Ngomnyaka we-1785, wawisa inja kwinqwelo edibeneyo kwi-ibhaluni ephakamileyo emoyeni.
I-Parachute yokuqala yeSoft
Ngomnyaka we-1793, uBlanchard wathi ubalekile kwibhaluni yomoya oshisayo oqhutywe ngeparachute. Nangona kunjalo, kwakungekho namangqina. I-Blanchard, kufuneka kuphawulwe, yenze iparachutti yokuqala ephathekayo eyenziwe kwisilika. Kuze kube loo nto zonke iiparachuthi zenziwe ngeefowuni ezinzima.
U-Andrew Garnerin - I-Parachute Eyokuqala Eyaziwayo
Inzala yeNkulumbuso ngeparachute, 1797 - iGouache kunye ne-watercolor. Udwebo ngu-Etienne Chevalier de Lorimier
Ngo-1797, uAndreya Garnerin waba ngumntu wokuqala orekhodiweyo ukuba agxume ngeparachute ngaphandle kobunzima obunzima. I-Garnerin yaya kwiibhaluni zomoya ezishisayo ezinokuphakama kwii-8,000 inyawo emoyeni. I-Garnerin nayo yenzelwe umbane wokuqala womoya kwiparachute ejolise ekunciphiseni ukuchithwa.
Parachute kaAndrew Garnerin
Imibono emithathu ka-Andrew Garnerin Parachute. LOC: Iqoqo leTissandier
Xa ivuliwe, u-Andrew Garnerin parachute wayefana nesambulela esikhulu malunga nobude bamamitha amathathu. Yenziwe nge-tovas kwaye yaqhotyoshelwe kwibhaluni ye-hydrogen.
UkuQala kokuQala, ukuHlenga, ukuKwazisa, ukuPhepha
- 1920 iParachute Design. USPTO
Nazi ezinye iimbalwa ezimbalwa ezaziwa malunga neparachutes.
Ngowe-1837, uRobert Cocking waba ngumntu wokuqala ukuba afe ngenxa yengozi yeparachute.
Ngowe-1887, uCaptain Thomas Baldwin wasungula intambo yokuqala yeparachute.
Ngo-1890, uPaul Letteman noKatchen Paulus baqulunqa indlela yokunyumba okanye ukupakisha iparachute kwi-knapsack ukuba igqunywe kumntu ngaphambi kokuba akhululwe. I-Kathchen Paulus nayo yayisemva kokuveliswa ngokuzikhethela, apho iparachute encinane ivula kuqala kwaye idonsa iparachute ephambili.
Ukuhlahlela kwi-Airplane, i-Freefall yokuqala
Iiparachuthi ezimbini zibanga ukuba ngowokuqala ukuxhuma kwi -moya . Bobabini uGrant Morton noKaputeni Albert Berry bahamba ngeparachuthi kwi-moya ngo-1911. Ngowe-1914, iGeorgia "iTiny" i-Broadwick yenza inkululeko yokuqala.
Tower Tower Training Training
1933 iParachute Design. USPTO
I-Polish-American Stanley Switlik yasungula i-"Canvas-Leather Specialty Company" ngo-Oktobha 9, 1920. Inkampani yokuqala eyenziwe njengezinto ezinqabileyo zesikhumba, izikhwama zegalufu, iingxowa zelahle, ii-cookie rollings kunye neebhokisi zeposi. Nangona kunjalo, u-Switlik uyatshintsha ngokukhawuleza ukuba enze ibhanti yokuqhubela phambili kunye neebhondi, ukuyila iimpahla zendiza kunye nokuzama iiparachuthi. Inkampani yakhawuleza iqanjwe ngokuthi nguShinlik Parachute kunye neNkampani yeSixhobo.
Ngokutsho kwe-Switlik Parachute Inkampani: "Ngowe-1934, uStanley Switlik noGeorge Palmer Putnam, umyeni ka-Amelia Earhart, baqulunqa umanyano kunye nokwakha inqaba ende enamamitha angama-115 kwifama yaseStleyley e-Ocean County. Yenzelwe ukuqeqesha i-airmen kwi-jumping parachute, Umntu wokuqala ophuma kwinqaba yenziwe nguNksz Earhart ngoJuni 2, 1935. Ekhokelwa sisihlwele sabezindaba kunye namagosa avela kwi-Army neNavy, wachaza inzala ngokuthi "Imithwalo yokuzonwabisa!"
URobertus Pudyanto / Getty Izithombe
I-Parachute ixhuma njengemidlalo eyaqala ngawo-1960 xa i-"parachuts ezemidlalo" ezitsha zenziwe kuqala. I-parachute ngaphezu kweendlela zokuqhuba ukuzinza okukhulu nokukhawuleza.
Iimpawu zeMandla zeMatriki ezisisiseko
Iingoma eziphambili zelizwe elifutshane zeGitarari ye-Acoustic
Imfazwe Yehlabathi II: i-V-2 Rocket
Kutheni AmaGrike asendulo ayebizwa ngokuba yiGehena?